नेपाली जनताले दुई पटक असक्षम घोषित देउवालाई प्रधानमन्त्री किन मान्ने ? भिडियाे सहित – Complete Nepali News Portal
नेपाली जनताले दुई पटक असक्षम घोषित देउवालाई प्रधानमन्त्री किन मान्ने ? भिडियाे सहित
May 30, 2017	635 Views
बाबुरामले अब राजनीति छाडेर काशी गए हुन्छ
राजनीतिक संक्रमण र संविधान कार्यन्वयनको पहिलो खुट्कीलालाई संयमतापूर्वक सम्पादन गर्ने प्रचण्डलाई इतिहासले सधै सम्झिरहनेछ ।
हरिराम रिमाल, केही समय अघिसम्म नयाँ शक्ति पार्टीको केन्द्रीय परिषद सदस्य हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिमा १० वर्ष विताइसक्नु भएका रिमाल सामाजिक अभियन्ता र व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ । राजनीतिमा गहिरो रुची राख्ने रिमालसँग नेपाल आजले गरेको कुराकानी
प्रचण्ड पछि अब शेरबहादुर देउवाले सत्ता लिने कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
प्रचण्डलाई नै नेतृत्व सम्हाल्न दिएको भए के बिग्रन्थ्यो ?यो एकदमै गलत भयो । नेपालको राजनीतिमा यो भन्दा अघि पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बीचमा सरकारको सहमति भएको थियो ।
केपी ओलीले पनि त्यसलाई लत्याए भनेर बाहिर छापामा ती कुराहरु आए । त्यो भन्दा अघि पनि धेरै राजनीतिक घटना हामी देख्न सक्छौँ की भद्र सहमति हुने तर त्यसको कार्यन्वयन नहुने ।
त्यो लगातारको प्रक्रियालाई प्रचण्डले इमान्दारीपूर्वक निभाउनु भएको छ । शेरबहादुरले त्यो नैतिक संकट ल्याएर उहाँलाई राजीनामा गर्नका लागि त्यस्तो वातावरण बनाउनुभयो । यो सर्वथा गलत छ किनभने यसले व्यक्तिगत रुपमा प्रचण्डलाई त गर्छ तर घाटा सबै शेरबहादुर र नेपाली कांग्रेसलाई नै हो ।
शेरबहादुर देउवाले हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विशेषगरि लोकतन्त्र नै शंकटमा पर्दा दरबारमा लगेर लोकतन्त्र बुझाए भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । एकपटक उनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम भनेर फालिदिए फेरि दोस्रो पटक आफू संकटमा परेपछि राजदरबारमा लोकतन्त्र बुझाउँदै आफैले फुटाएको कांग्रेसलाई जोड्नुभयो ।
पछिल्लो समय प्रधानन्यायधीश विरुद्धको महाअभियोगको सारा दोष पनि कांग्रेसले झेलेको छ । देउवाले सत्ताको लागि कतिसम्म मरिहत्ते गर्छन् भन्ने कुरा हिजो इतिहासले त देखाएकै थियो ।
भइरहेको सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि जब अर्को नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिन्छ भने त्यसको सारा दोष सिंगो कांग्रेस पार्टी र शेरबहादुरले बोक्नुपर्छ ।
नउठाउँदा उहाँहरुले त्यस्तो केही सजाय पाउनुभएको छैन । तर, नेपाली जनताले अलिकति सचेततापूर्वक आफ्ना प्रतिनिधी छनौट गर्न थालेको निर्वाचनले देखाएको छ ।
धेरै ठाउँमा नेपाली जनताले भोट माग्न गएका उम्मेदवारसँग आफ्नो गाउँको शिक्षा, सेवा, स्वास्थ, सडक माग्न थाल्नुभएको छ । त्यसकारणले पनि यो निर्वाचनले विकासका एजेन्डालाई अघि सारेको छ । त्यसकारण त्यो नारा मात्र लगाउने होइन । नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरुको दुईवटा कुरा देखियो ।
एउटा, आफ्नो राजनीतिलाई चर्चित बनाउको लागिमात्र नारा दिने तर त्यो मुद्दालाई हामीले अघि बढाउन सक्छौँ भन्ने समथर््य र शक्ति नेपाली जनतालाई विश्वस्त रुपमा दिलाउन नसक्ने देखियो । यो कुरालाई हाम्रो नयाँ शक्ति पार्टीले उठायो तर त्यसले नेपाली जनतालाई पूरा गर्न सक्ने समथ्र्यलाई प्रमाणित गर्न सकेन ।
यसकारण मतदाताहरुले यो मुद्दा अस्वीकार गरिदिए । त्यसले गर्दा अब विस्तारै निर्वाचनमार्फत पनि त्यो कुरालाई समातेको छ । यो नारा अब अझै प्रबल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
प्रचण्ड सरकारको टिप्पणी गर्दा मैले एक वाक्यलाई प्रयोग गर्ने गरेको छु । यदि प्रचण्डले अहिले जुन खालको सन्तुलन यो राजनीतिक संक्रमण र संविधान कार्यन्वयनको पहिलो खुट्कीलालाई संयमतापूर्वक सम्पादन गर्नुभयो ।
यसको लागि इतिहासले प्रचण्डलाई सधैँ सम्झिरहनेछ । त्यतिमात्र होइन दश महिनामा प्रचण्ड सरकारले गर्न सक्ने जति प्रशश्त कामहरु गरेको छ । त्यो भन्दा धेरै काम गर्न सक्ने भौतिक परिस्थिति पनि छैन ।
प्रचण्डले यस्तै खालको सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गर्नुभएको भए २०८० सालसम्म पनि देश नै माओवादीमय र प्रचण्डमय भइरहने थियो ।